Umkhiqizo "inosine pranobex" noma ngenye "Isoprinosine" Kuyinto ejenti immunostimulatory kokuba liphinyiselwe umphumela namagciwane. Lesi sidakamizwa kubonisa umsebenzi omkhulu ngokumelene inqwaba Amagciwane ahlukahlukene. Ngokwesibonelo, ukusebenzisa kakhulu ngempumelelo ngokumelene cytomegalovirus, Herpes igciwane simplex kanye nesimungumungwane, Umkhuhlane A no-B, ESNO-, polioviruses, encephalitis Equine futhi encephalomyocarditis. Ngesisekelo kwemithi kwezidakamizwa isenzo "inosine pranobex" iyona okusithiyayo of enzyme kanye RNA digidropteroatsintetazy Ngekudlala indzima ukufanisana kwezinye nezilwanyana ezincane pathogenic. Lapho ethola lokhu immunostimulant angabacwasi ngokushesha ugxile, lafinyelela lokuhlushwa esiphezulu we ketshezi esebenzayo ngokusebenzisa amahora eyodwa nambili. Ezinsukwini ezimbili kamuva ngesimo metabolites umchamo excreted kusuka emzimbeni ngokuphelele izidakamizwa "inosine pranobex". Intengo zomuthi imayelana amane noma amahlanu ruble iphakethe ngalinye.
Uhlu izinkomba yezokwelapha
Thatha mzimba-inkanuko izidakamizwa "inosine pranobex" Kunconywa ngokuyinhloko for ekwelapheni izifo ezinjengomkhuhlane, labial noma samabhamuza ezithweni zangasese, isifo cuphuluza igciwane herpes simplex, SARS, ezimise okwama-tile, upokisi futhi keratitis herpetic nemvelo. Ngaphezu kwalokho, ngenkuthalo enikezwa imithi ka isimungumungwane ezinzima, molluscum contagiosum. Ngoba impatho ka mononucleosis ezithathelwanayo, cuphuluza igciwane Epstein-Barr, cytomegalovirus futhi Human Papillomavirus izifo futhi angasebenzisa izidakamizwa "inosine pranobex". Analogs ye-ejenti immunostimulating - kusho "Isoprinosine" futhi "Groprinosin" - nomphumela ofanayo futhi ibuye isetshenziswe yokwelapha lezi zifo.
Izici ukusetshenziswa kanye umthamo
Thatha imithi "inosine pranobex" kufanele kube emva kokudla ngesilinganiso angu ayisihlanu izidakamizwa amakhilogramu esisindo ngayinye. Amaphilisi obonisa kathathu kuya kwamane ngosuku.
Ngo amafomu okunzima kakhulu lesi sifo, umthamo kungase kukhule ku eziyikhulu angu kilogram of isisindo ngayinye. Kulokhu, ngesilinganiso izidakamizwa "inosine pranobex" kufanele ihlukaniswe ngemithamo ezine kuya kweziyisithupha. Umthamo esiphezulu imayelana ezintathu amagremu ngosuku. Isikhathi yokwelapha kuyahlukahluka zingakapheli izinsuku ezinhlanu kuya nane. Uma kunesidingo, ukuphathwa ingaphinda enwetshiwe. Ukwelashwa kufanele kuqhutshwe aze ukunyamalala ephelele izimpawu isifo futhi izinsuku ezimbili ngemva kwalokho.
Izimo yezokwelapha Eziyisisekelo
It is hhayi Kunconywa ukuthatha izidakamizwa "inosine pranobex" iziguli nge urolithiasis, sifo, ukwehluleka kwezinso, arrhythmias, kanye ukuzwela umuntu ukuba izingxenye zalo. yobudala Wezingane (kufika ku iminyaka emithathu), bekhulelwe nangenkathi bencelisa nazo izizathu ukukhansela ejenti immunostimulating.
Amalungiselelo ukukhwehlela: kanjani ukuqonda omningi izidakamizwa?
Canon LBP-6020 laser printer - ephelele isixazululo entry level